आज अमेरिकी डलरसहित सबै विदेशी मुद्राको भाउ घट्यो ! कुन देशको कति पुग्यो ? हेर्नुस – Nepal Trending
On २१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १२:३७
काठमाण्डौ : मंगलबार अमेरिकी डलरसहित सबै विदेशी मुद्राको भाउ घटेको छ । आज मंगलबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ १२ पैसा तोकेको छ । हिजो डलरको खरिददर १११ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ७९ पैसा तोकेको थियो ।
यस्तै साउदी रियाल १ को खरिददर २९ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर २९ रुपैयाँ ६३ पैसा छ । हिजो रियाल १ को खरिददर २९ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर २९ रुपैयाँ ८१ पैसा थियो ।
आज कतारी रियाल १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ । हिजो खरिददर ३० रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ७० पैसा रहेको थियो । यूएई दिर्हाम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ २५ पैसा छ । हिजो खरिददर ३० रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ४३ पैसा थियो ।
मलेसियन रिंगिट १ को खरिददर २६ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर २६ रुपैयाँ ५७ पैसा छ । हिजो खरिददर २६ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर २६ रुपैयाँ ६८ पैसा थियो । एक सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । हिजो सोमबार पनि खरिददर ९ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ४० पैसा नै रहेको थियो ।
कुवेती दिनारको १ को खरिददर ३६३ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ३६५ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ । हिजो खरिददर ३६५ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ३६७ रुपैयाँ ९१ पैसा थियो । बहराइन दिनार १ को खरिददर २९३ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर २९४ रुपैयाँ ७४ पैसा छ । हिजो खरिददर २९४ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर २९६ रुपैयाँ ५२ पैसा थियो ।